Azia Afovoany : Tsy Avy Mihitsy Ny Orana Fa Rehefa Avy Izy Dia Oram-Batravatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2014 15:17 GMT
Tondra-drano tany Almaty. Sary nakarin'i Dina Sabyrova (@4144777) tao amin'ny Twitter, fantatra amin'ny fahavaratra mafana sy maina sy ny ririnana lava sy mangatsiaka miaraka aminà ranomandry miendrika orana ny faritra Azia Afovoany. Fa rehefa misokatra ny lanitra, tsy tombony ho an'ny oram-panala, tahaka izay hitan'ireo mponina ao amin'ireo tanàn-dehibe telo amin'iny faritra iny tamin'ny herinandro lasa.
Ny 30 sy 31 May teo, orambe nivatravatra nitondra riaka mahery no nandrava tany Almaty any Kazakhstan, Tashkent any Uzbekistan ary Bishkek any Kyrgyzstan. Raha toa ka nijanona teo amin'ireo fiara mitsingevana sy trano safotry ny rano ny loza, ho an'ny tany Kyrgyzstan kosa dia ratsy kokoa satria nisy lehilahy iray maty nianjeran'ny hazo niongotra hatramin'ny fàkany.
Notaterin'ny haino aman-jery Kazakh tamin'ny 31 May fa tena safotry ny rano ara-bakiteny i Almaty, ilay tanàna lehibe indrindra izay misy mponina manodidina ny 1,4 tapitrisa. Tsy ampy ho an'ny riaka ireo fanarian-drano izay nasiam-panamboarana tamin'ny andron'ny sovietika, toy ny fitohanan'ny fiara miforona eny an-dàlamben'i Almaty sy ny faritra fonenan'ny mpanambola, ireo toeram-panorenana foto-drafitrasa sy ny faritra misy ireo mpivarotra ao afovoan-tanàna dia safotra avokoa. Ankoatry ny zava-niseho dia tsikerain'ny mponina ny tsy fahampian'ny tambajotra mitondra rano sy ny fihazakazaky ny fanamboarana tanàn-dehibe ho an'ny tondradrano.
Raha ampitahaina tamin'ny andron'ny Sovietika dia nitombo isa ireo faritra tsy mitroka ranon'orana- tafotrano sy tranobe, rarivato sy arabe. Tsy ampy ho an'ny habetsahan'ny rano intsony ankehitriny ireo fantsona, naorina folo taona lasa izay. [Olana iray hafa] tsentsin'ny fako ny lakandrano, fa ny tena olana dia mavesatra kokoa ny tondradrano amin'ny maha-tondradrano azy fotsiny.
Safodrano tamin'ny 30 May i Tashkent, renivohitr'i Uzbekistan izay misy mponina maherin'ny 2 tapitrisa. Anaty rano avokoa ny zavatra rehetra manomboka amin'ireo toerana fitobian'ny fiara ka hatramin'ireo faritra filalaovana raha fitohanana goavana amin'ny fifamoivoizana kosa no miforona manaraka ny sampanan-dàlana lehibe rehetra ao an-tanàna. Izao no nosoratan'i Vyachesla maneho hevitra momba ny tatitra navoakan'ny Gazeta.uz :
Mihitsoka ny rafi-pifamoivoizana eto aminay. Tsy fampisehoana ataon'ny PR ho an'ny manam-pahefana eto an-toerana anefa ity fa tena olana lehibe dia ny tsy maintsy hanehoan'izy ireo izay azony atao hanampiana ny tanàna hiatrehana ny orana. Aiza no toerana ivarinan'ny ranon'orana ? Aiza ireo fiarabe afaka mitroka ny rano hivoaka ny tonelina sy ny fiarandalamby ambanin'ny tany ? Misy olona ho voasazy noho io ve ?
Oram-batravatra tany Tashkent. Sary nalaina tamin'ny vondrona Facebook ho an'ny daholobe Drivers of Tashkent.
Tsy eken'i Shukhrat Alymbaev, mponina iray hafa ao Tashkent, ny hoe ho afaka hiady amin'ny tondradrano ny fiadidiana ny tanàna :
Tsy misy olona tsara fiomanana ho amin'ny karazan'orana tahaka io. Singa voajanahary io, tsy azo anoharana. Betsaka ireo mitsikera ny tolotra ho an'ny daholobe ao amin'ny tanàna, nefa raha ny marina, hitako ankehitriny fa manao izay ho afany ry zareo hamahàna ny olana amin'ny fotoanan'ny tondradrano.
Raha vao nitsahatra ny orambe dia nanao tombana ny fahasimbàna ny haino aman-jery Uzbek : hazo be dia be nianjera, fiara maro mifandona ary trano safotry ny rano, fa tsy nisy olona naratra na maty. Ny any atsimo kokoa, any Tajikistan dia hatreo amin'ny fivangongoan'ny fiara manentsina ny làlana ihany ny loza. Fa ny tany Kyrgyzstan kosa dia nampihorohoro ny vokatry ny haratsian'ny toetr'andro, namoizana ain'olona iray, naharatrana iray hafa ary nandrovitra ny sainam-pirenena izay nanidina teny amin'ny kianjan'i Bishkek.
Nambaran'ny mpanolotsain'ny tanànan'i Bishkek tamin'ny 31 May :
Hazo 16 no nianjera noho ny herin'ny rivotra sy ny orana tany Bishkek tamin'ny 30-31 May. Olona iray no maty, fiara roa simba… rovitra ny saina tao amin'ny kianjan'i Ala-Too ary rava ny ankamaroan'ireo asan'ny jenia tao Bishkek sy zavatra maro hafa vokatry ny fianjeran'ny hazo.
Lehilahy iray maty nitsitra tao afovoan'i Bishkek tamin'ny 31 May rehefa nianjeran'ny hazo ny lohany Sary avy amin'i vb.kg/azzatyk.
Haingana ny famalian'ireo mpiasam-panjakana any Bishkek ireo tsikera fa azo nialàna ny fahafatesan'ilay lehilahy tsy fantatra anarana ary vokatry ny tsy fandraisan'ny tanàna andraikitra :
Nisy fandaminanà ekipa afaka mivezivezy mba hanadio ny tanàna taorian'ilay oram-batravatra. Misy fikarakarana fijerena manokana atao an'ireo hazo izay atahorana ihany koa. Efa mandeha ny asa amin'izao fotoana izao.
Nanaitra ny mponin'i Bishkek ny tsy firaharahiana ny fahafatesan'ilay lehilahy. Heverina fa niandry ny fahatongavan'ny fiara fitaterana hita na aiza na aiza ao an-tanàna izy no tonga ilay rivotra be nanongotra ilay hazo teo akaikiny ka nianjera tampoka teo aminy. Nisy lehilahy anankiray nianjeran'io hazo io ihany koa saingy nentin'ny fiara mpitondra marary tany amin'ny toeram-pitsaboana ka avotra. Hanoherana ny fisafotofotoan'ny haino aman-jery sosialy hoe i Bishkek, nomem-boninahitra ho “tanàna maitso” nandritry ny vanim-potoana Sovietika, dia rakotra hazo antira miandry fotsiny ny hotapahana, nieritreritra [ru] ny olona iray naneho hevitra tao amin'ny tranonkalan'ny Vecherni Bishkek hoe:
Nody avy niasa aho ary nijanona efa ho ora roa teo ho eo tao anaty fifamoivoizana teo akaikin'ny [ magazay] 1000 Small Things ( zavatra bitika an'arivony). Tezitra tamin'ny tontolo aho nefa hita fa nisy ny niharam-boina tamin'izany andro ratsy izany. Andriamanitra ô! izao vao fantatro fa tsy misy dikany ny [ zavatra niainako] ary misy olona any namoy ny malalany (((
Na dia vitsy aza ireo mihevitra ny hiverenan'iny tranga andro ratsin'ny 30-31 May iny ao anatin'ny fotoana fohy, ho an'ny ankamaroan'ny mponin'ireo tanàna fototr'i Azia Afovoany kosa dia nanamafy ny finoana fa miaina amin'ny tontolon'ny fifanampiana ry zareo raha toa ka mihemotra manoloana ny loza kosa ireo mpiandraikitra ny fiainam-bahoaka. Araka ny naminanian'i Aleksandr Tikhonov azy amin'ny fanehoany hevitra ao amin'ny gazeta.uz :
Tsy miasa amin'ny toe-javatra tahaka ireny ireo mpiandraikitra ny fiainam-bahoakanay. Ekena fa mora ny miteny hoe :” olan'ny maty an-drano ny famonjena ny maty an-drano”, saingy mampametra-panontaniana io hoe : nahoana isika no mila fanjakana, lalàna, ary karazam-pitantanana maro samy hafa ???
Mpitandro filaminana manao akanjo fiaro orana mialoka any Almaty. Sary nakarin'i @4144777 ao amin'ny Twitter